IPHONE အတွက်အလောင်းအစားအားကစားများအတွက် APPLICATIONS ကို - IOS အတွက် - 2019
IPhone အတွက်အလောင်းအစားအားကစားများအတွက် Applications ကို
အစပိုင်းမှာလူမှုကွန်ယက်ကို Instagram ကိုသင်ပို့စ်တွင်တစ်ဦးတည်းသာဓါတ်ပုံကိုထုတ်ဝေခွင့်ပြုပါတယ်။ သဘောတူကစီးရီးထဲကနေတချို့ဓါတ်ပုံတွေထွက် တင်. ရန်လိုအပ်သည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အလွန်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, developer များဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုငါကြားရပြီနှင့်မျိုးစုံရုပ်ပုံများကိုထုတ်ဝေနိုင်စွမ်းအကောင်အထည်ဖော်ပါပြီ။
အဆိုပါ function ကိုခေါ်တော်မူသည်ကို "Carousel"။ သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်း, စိတျထဲတှငျအင်ျဂါရ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုစောင့်ရှောက်:
ဒီ tool သင်တဦးတည်း Instagram ကို-post ကို 10 ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမှတက် post ခွင့်ပြု;
သင်စတုရန်းပုံရိပ်တွေဖြန့်ဝေချင်ကြပါဘူး အကယ်. အခြားဓါတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာအတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် pre-လိုအပ် - "Carousel" သင်ပုံရိပ်တွေသာ 1 ထုတ်ဝေခွင့်ပြု: 1 ။ အဆိုပါဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အဆိုပါ Instagram ကို app နဲ့ပြတင်းပေါက်၏အောက်ဆုံးအပိုင်းအလယ်ပိုင်း tab ကိုဖွင့်ပါ။
ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေကိုသင်ပွင့်လင်း tab ကိုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ "စာကြည့်တိုက်"။ ပုံရိပ် (3) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း, "Carousel" အိုင်ကွန်၏ညာဘက်ထောင့်တွင် tapnite များအတွက်ပထမဦးဆုံးပုံတစ်ပုံကိုရွေးချ။
ရွေးချယ်ထား image ကိုလှည့်ပတ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် (စသည်တို့ကို, 2, 3, 4), သငျသညျချင်နိုင်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံများကိုထားပုံတစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါကိုရွေးပါ, သူတို့ကိုအရအေတှကျနိုင်ရန်အတွက်။ ခလုတ်ကိုရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်ရှိဓာတ်ပုံများကို tapnite တစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူဘွဲ့ရပြီးနောက် "Next ကို".
အောက်ပါဓာတ်ပုံများကိုအယ်ဒီတာအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိပုံရိပ်ဖို့ filter ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်လိုလျှင်တစ်ကြိမ်ပေါ်မှာ tapnite, အဲဒီနောက်မျက်နှာပြင်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်ပြပေးလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့်သည်အခြားပုံရိပ်တွေကို "Carousel" အကြားအကူးအပြောင်းနှင့်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ပါ။ ကိုလက်စသတ်သောအခါ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စာစောင်၏ဖော်ပြချက်မှထည့်ပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများများ၏ရုပ်ပုံများကိုလျှင်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သုံးစွဲသူမာကု"။ အဲဒီနောကျ, ရုပ်ပုံများအကြား switching left သို့မဟုတ်ညာဘက်, သင်ပုံရိပ်တွေအပေါ်နှိပ်, ရှိသမျှအသုံးပြုသူများလင့်များ add နိုင်ပါတယ်ပွတ်ဆွဲပါ။
Read more: အဘယ်သို့ငါ Instagram ကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံအသုံးပြုသူတစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်ပြု
သငျသညျဖို့ရှိသည်အားလုံး - ကထုတ်ဝေဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ button ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "Share".
တဦးတည်း Post-Instagram ကိုမှာ Post မျိုးစုံဓာတ်ပုံများအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျနော်တို့ကိုသင်ဖို့ကသက်သေပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ဘာသာရပ်အပေါ်မဆိုမေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးမြန်းဖို့သေချာပါစေ။
IPhone ပေါ်မှာ installation နည်းလမ်းများကြေးနန်းတမန်
Windows 10 ကိုအတွက် Desktop ပေါ်မှာပျောက်ဆုံး icon များနှင့်အတူထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း
အဆိုပါ NVIDIA GeForce GT 430 များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ပြီး install
အဆိုပါရေစာ Bandicam ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
Microsoft က Excel ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ: အော်ပရေတာ '' လျှင် ''
Disk ကိုရုပ်ပုံများကိုအတူလုပ်ကိုင်၏လူကြိုက်များနေသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ discs တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနေဆဲမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အများစုကတော့သူတို့ရဲ့ operating system ကိုအတူတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် disk ကိုမှတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, သို့မဟုတ်အခြား Bootable media တစ်ခုလုပ်ရအောင်ဖန်တီးရန်။ နီရို - အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ "disc ကိုစံချိန်တင်" များစွာသောလူအစဉ်အလာ, ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
CDR ဖိုင် AI အပြောင်း